Ụdị basilist kachasị ewu ewu: nkọwa na foto - Basilist - 2019
Nkọwa na foto nke basil
Vasilistnik (Thalictrum) - azu osisi, ahịhịa, okooko shrub nke ezinụlọ buttercup, dịpụrụ iche na ọdịdị dịgasị iche, nke gụnyere ihe karịrị osisi 145. Ebe omumu nke basilist bu China. Na mba anyị, Basil na-eto na ọnọdụ ndị dị na Middle Belt na Siberia, n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa, n'oge a na-akọ ihe, a na-eji ya dị ka ogige okooko osisi ma ọ bụ ọgwụ.
Vasilistnik dabara na nkọwa a: nwere epicoles dị nro dị ka triangle, nke a na-agbakọta n'ime rosette (doo na mkpoko osisi bụ, ma ọ bụ otu), na airy, okooko osisi na-esi ísì ụtọ dị ogologo, dị ka mmụba nke ọkụ. Okooko osisi, dị mfe ma ọ bụ terry, na-anakọta na nnukwu ihe ndị dị na agba dị iche iche - lilac-pink, lilac, cream, pink pink, yellow, white. Mkpụrụ osisi ahụ bụ ọtụtụ anụ nke nwere mkpụrụ 600-650.
Ị ma? Basil ifuru bụ oyi hardy, unpretentious na bụghị picky banyere ala. N'otu ebe na-etolite ruo afọ 8-12.
Ụgha Basil Basil
Basil kpara akpa
Ọ bụ obere osisi, ruo 15-20 cm n'ịdị elu, ifuru na-achọ mma na okooko osisi pink-brownish, gbakọtara na ahịhịa dị mfe, na obere akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, nke a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ dị mma maka ugwu ugwu, ogige osisi, ịmepụta ugwu ndị a na-achọ mma, ngwugwu dị iche iche. Ebumnuche nke ọgwụgwọ na-eji agwọ ọrịa na ngụgụ. Mgbe ịzụlite na-eburu n'uche na basil na-adịghị anabata mmiri mmiri, na mmiri mmiri na-aga n'ihu na-anwụ anwụ.
Nkọwa ahụ bụ basil nke anemonella N'ihe dị elu nke 9-15 cm, okooko ndị ahụ na-acha ọcha, na-acha ọcha, pink, pink na ọcha, acha ọcha-acha ọcha, lemon-acha. Ugbo dị ogologo, nke dị mkpa na tinge ọbara ọbara, tripartite, na-agba egwu, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Osimiri na-eme na njedebe nke April - May.
Ihe kachasị na ubi anyị bụ basil basil. N'ebe obibi ya, ọ na-etolite n'ọhịa, na ala ahịhịa juru, na ide mmiri flooding - na ebe dị mma na okwute. O nwere ike iru mita 1.5 m, mana ọ na-etolite na 60-90 cm.
Osisi ya bụ acha odo odo ma ọ bụ na-acha ọcha, na-agbakọta na spherical inflorescence-whisk. Taa, e nwere ụdị ihe dị iche iche nke basil na violet, uhie, okooko osisi pink. Osisi ndị ahụ nwere okpukpo ọkụ dị ụtọ. Akwụkwọ ndị ahụ dị nnukwu, nke nwere okpukpu atọ, na-acha akwụkwọ ndụ-acha akwụkwọ ndụ ndo. Oko mmiri na-adị 4-4.5 izu, na mbubreyo May - mmalite July. A na - eji ọgwụ agwọ ọrịa maka ọgwụgwọ edema, jaundice, ịba, ọrịa gynecological.
Ọ dị mkpa! A ghaghị ịmepụta decoctions na infusions nke basilus n'ime ya dịka usoro ọgwụgwọ siri ike, nke a na-apụghị ịgbanwe onwe ya iji zere nsị. A na-emegide ya ma ọ bụrụ na ọ bụ hypotension, bradycardia, ike obi obi na ụfọdụ ọrịa nke usoro digestive.
Ifuru ruo 1.8 m, na akwa lilac (lavender) okooko osisi, anakọtara na oblong paniculate inflorescences. Akwụkwọ ahụ bụ feathery, ọgaranya na-acha akwụkwọ ndụ. Okooko - July-August. O nwere ezigbo mma. Vasilistnik Dipterotropidae yiri nke Delaivaya Vasilistnik, nke nwere otu ọdịiche - o nwere mkpụrụ osisi ọtụtụ mkpụrụ na nku.
Basil Delapay ngwa ngwa gbanye mgbọrọgwụ, a hụkwara ya n'anya nke ukwuu, ntachi obi na enweghị atụ na ịgha mkpụrụ. Ọ bụ ogologo (ruo 2 m), ifuru osisi. Oge okooko osisi na - amalite na June - September. Ọ nwere ọmarịcha odo odo odo (e nwere ọtụtụ dị iche iche na-acha ọcha okooko osisi), anakọtara na nnukwu paniculate inflorescence, epupụta - ugboro atọ ma ọ bụ anọ-acha, ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Na-ele anya ma ma ya onwe ya, kụrụ naanị ya n'ebe dị iche iche, yana otu - na-atụgharị uche ma ọ bụ na usoro e mere atụmatụ, nakwa dị ka ihe dị n'ime ya.
Ị ma? Mgbe ị na-eto basil, ọ dịghị emeghe, ebe anwụ na-acha - na mmiri zuru ezu ọ na-eto nke ọma na penumbra na ndò.
Ọnụ ọgụgụ n'etiti vasilistnikovs dị elu 110 cm n'ogologo, odo odo vasilistnik bụ nke dị nro, nke dị ụtọ, na-esi ísì ụtọ, okooko osisi dị mma na ọmarịcha arụmọrụ. Osisi bụ odo, gburugburu, anakọtara na ok, nnukwu inflorescence-panicle; epupụta bụ pinnate, beothed. Agba agba na-acha isi awọ-isi awọ si n'elu, na-acha ọcha-agba ntụ si n'okpuru. Okooko - June.
Nnukwu ornamental osisi na elu nke 20-25 cm, na pinkish-ọcha ma ọ bụ ọcha ọcha okooko osisi, zukọtara corymbose inflorescence, na grayish-green epupụta. Ezigbo maka ihe nkiri slide, na-eke ala, na-emepụta akụrụngwa. Dị ka basilist alpine ahụ, ọ dịghị amasị oké mmiri mmiri. Okooko - mmalite nke June.
N'ịdị elu - 15-30 cm, na-acha odo odo, gbakọtara na a rụrụ inflorescence-panicle, na atọ ma ọ bụ anọ-leafy obere leaf, na-akpụ a mara mma achọ openwork nwa ehi, n'ihi na, dị ka ụkpụrụ, nwere ekele. Okooko - June-July.
Ruo 45 cm elu, ma na-eto eto na-eto 20-25 cm n'ịdị elu. Osisi ndị ahụ na-acha ọcha, na-ekpokọtara na ihe ndị a na-emeghe, akwụkwọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ dị ogologo oge rhizomes dị ike, ekele nke basil bụ filamenty na ọnọdụ ndị dị na ya, ọ na-abawanyewanye, na-enwe obi ụtọ zuru ezu. A pụrụ iji osisi a dị mma mee ihe n'ubi maka ihe ịchọ mma - ịmepụta ebe-efere nke basil. Okooko - mmalite na etiti May.
Ị ma? Basil filamentous - onye na-edekọ ihe ndekọ n'etiti ndị gbasiri ike maka ịdị ogologo ndụ: ọ nwere ike ibu ihe karịrị afọ 20 n'otu ebe.
A na - akpọ ya na - eto eto - ya bụ Sakhalin, nakwa ụfọdụ n'ime Kuril Islands. A na-achọta ya na Hokkaido (Japan). Na-eto eto dị ka ụdị ejiji na ọgwụ. Eji ya na-agwọ ọrịa nke akụkụ eriri afọ, n'èzí - n'ihi na ọkpụkpụ, ọnyá, ọnyá. Okooko a ruru elu 45-55 cm, okooko osisi na-acha ọcha, na-esi ísì ụtọ, na-anakọtara na whisk na-eche nche, epupụta bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, okpukpu abụọ na okpukpu atọ. Okooko - mmalite nke June.
Ụdị a na-emekarị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ na Siberia, ọ dị ka basilica catchment na-eto site na gardeners maka otu nzube - dị ka ornamental na ọgwụ ọgwụ.
Ị ma? Ọ bụghị akụkụ nile nke basilist ka ejiworo na nkà mmụta ọgwụ. Maka ọgwụgwọ ọgwụ, epupụta, okooko osisi na rhizomes nke basil. Ulo anaghị adabara nke a.
Ruo 1.3-1.5 n'ịdị elu, ya na okooko osisi odo odo, gbakọtara na pyramidal panicles, ya na oblong-abụọ-amụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nkume dị elu bụ nke na-egbuke egbuke, ala - ubé pubescent. Ọ na-acha ogologo oge, blooms ebe ọ bụ na May. Ezigbo ihe jikọrọ n'ubi ahụ na osisi niile na ọkara osisi, na-ekepụta ihe dị iche iche dị egwu.
Ọ dị mkpa! Okpokoro basil dị elu mgbe a na-azụlite n'ubi ahụ, na akwa akwa, akwa ifuru, ọ bụ ihe na-achọsi ike iji tie.
Ikekwe basilica aghọwo ihe ịchọtara - ị gụtụbeghị ma ọ bụ nụ banyere ya na mbụ, ọbụlagodi na-eto eto na mpaghara gị. Kedu ihe na-abụghị ihe mere ị ga-eji lee ifuru ahụ mma ma kụọ ụfọdụ ụdị nyocha? Nke a bụ ezigbo nhọrọ iji gbanwee ahịhịa dị iche iche ma n'ogige ahụ nakwa na osisi ahụ, n'enweghị nchegbu kachasị maka ịmepụta ọnọdụ ọ bụla maka ifuru, - ọ na-agbanye mgbọrọgwụ, na-ewe mgbọrọgwụ ma na-amụba ọbụna na ala ndị na-emepụtaghị nke ọma.
Ngwakọta ngwongwo maka ala oghe - a tomato "Nadezhda": nkọwa nke ụdị dị iche iche, foto
Ichacha arịa ndị ahụ na garlic na mmiri ara ehi. Ntuziaka na ihe ngosi
Gini mere oji ohia ji adi na orchids? Nkọwa nke ọrịa ahụ na aro banyere otu esi emeso osisi ahụ
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Nkọwa na foto nke basil